अनुहार गोरो र चम्किलो बनाउन चाहनुहुन्छ ? यी १५ मध्ये कुनै एक उपाय फलो गर्नुहोस् | स्वास्थ्य जीवनशैली
June 25, 2021 NepstokLeaveaComment on अनुहार गोरो र चम्किलो बनाउन चाहनुहुन्छ ? यी १५ मध्ये कुनै एक उपाय फलो गर्नुहोस्
हा’मी अनुहारलाई लिएर निकै चिन्तित हुने गर्दछौ । सुन्दर, गोरो र चम्किलो अनुहार बनाउन सधै प्रयासरत पनि हुन्छौ । क्रिम पाउडर आदि लगाएर पनि अनुहार टल्काउने गर्दछौ । तर घ’रेलु उपाय भने हामीलाई थाहा नहुन सक्छ । अनुहार चम्काउन र सफा बनाउन सक्ने घरेलु उपाय धेरै छन्ः
१) यदि चर्को घाममा तपाईंको छा’लाको रङ फिक्का या कालो भएको छ भने काँचो टमाटरलाई मिचेर मोही हालेर अ’नुहार र छा’लामा लगाउनुहोस्, छा’लालाई शीतलता प्रदान हुनेछ र कालोपना पनि हट्नेछ ।
२) नुहाउने पानीमा एक गिलास लस्सी हालेर नुहाउनाले पनि बिस्तारै बिस्तारै सनटेन हट्नेछ । ३) एक सानो चम्चा काँक्राको रस, आधा चम्चा ग्लिसरिन र एक चम्चा गुलाबजल मिलाएर घामले डढेको छा’लामा लगानाले छाला नरम र गोरो हुँदै जानेछ ।
४) टमाटर र दही बराबर मात्रामा लिएर राम्ररी फिट्नुस् र यो मिश्रणलाई छा’लामा लगाएर १० मीनेटसम्म राख्नुस र चिसो पानीले धुनुहो’स् । यो सनबर्नको लागि राम्रो टनिक हो ।
५) काँचो दूधमा गुलाबजल हालेर कपासले छा’लामा लगाउनुहोस् । यसो गर्दा छा’लाको पुरै मैला कपासमा आउनेछ । ६) चन्दन पिसेर त्यसमा गुलाबजलका केही थोपाहरू हालेर बनाइएको लेप अनुहारमा लगाउनाले छा’लालाई शीतलता पुग्छ ।
७) कागती र मोही मिलाएर लगाउनाले घामका कारणले कालो भएको अनुहारमा निखार आउँछ । ८) एक चम्चा मख्खन र एक चम्चा पानी मिलाएर पिट्नुस, घाममा डढेको छा’लामा लगाउनुस् । यसले धेरै नै फाइदा गर्छ ।
९) दुई चम्चा काँक्राको रसमा एक चम्चा काँचो दूध हाल्नुस् र यसलाई कपासले अनुहार र गर्धनमा लगाउनुहो’स् । यसबाट छा’लाको छिद्र खुल्छन् र धुलो तथा अतिरिक्त चिल्लोपना हट्छ अर्थात यसले क्लिन्जिङको काम गर्छ ।
१०) एउटा स्या’उलाई पिसेर अनुहारमा लेप गर्नुहो’स् । आधा घण्टापछि मनतातो पानीले अनुहार सफा गरेपछि छा’लाको चिल्लोपना काम भएर छा’लालाई कान्तिमय र नयाँ स्फुर्ती प्रदान भएको अनुभव हुनेछ ।
११) छा’ला अति नै चिल्लो छर मेकअप रहँदैन भने बरफको टुक्रा दूधमा भिजाएर अनुहारमा दल्नुस् । यसबाट ताजगी र स्फुर्ती आउनेछ साथै चिल्लोपना रहनेछैन ।
१२) छा’लामा तुरुन्त स्फुर्ती ल्याउनका लागि कागतीको रस बराबर मात्रामा पानी हालेर त्यसलाई ट्रेमा जमाइदिनुस् । यो आइस क्युबलाई अनुहारमा दल्नुस् । चिल्लोपना नियन्त्रणमा आउँछ ।
१३) चिल्लो छा’ला भएका व्यक्तिहरूले कागतीको रस र त्यसको बोक्रालाई अनुहारमा दल्नाले फाइदा हुन्छ । १४) शीघ्र छा’लाको सफाइका लागि अंगुरको अर्धरस निकालेर बाँकी गुदी आफ्नो अनुहारमा रगड्नुस् । अंगुर अम्लीय हुन्छ, अतः रुखो र चिल्लो छा’लालाई समान रूपले पोषण र सफाइ गर्छ ।
हाडजोर्नी दुखाई देखि माेटाेपन घटाउनका लागी अचुक औषधिकाे काम गर्छ डल्ले खुर्सानीले, यस्ता छन् अचुक फाइदाहरु
के तपाईमा यस्ता संकेत छन् ? छन् भने तपाईं धेरै बुद्धिमानी र अरु के के?
मासु खाँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?